माइला लामा पत्नी मनुको रुवाउने स्टाटस: वादल दाइ ! तिम्रो मलामी हुन पाउ, – Rapti Khabar
नेता तामाङ्गकाे गिरफ्तारीप्रति सर्वत्र निन्दा भइरहदा उनलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले जेल चलान गरेकाे हाे । जनयुद्धका कमान्डर गृहमन्त्री भइरहदा उनकै पुर्वसहकर्मि माथी व्यापक दमन ब्याक्ति ह… हुदै झुट्टा मुद्दा लगायकाे भन्दै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलकाेे चर्काे आलोचना माओवादी पृष्ठभुमि भएकाहरु देखिन्छ । त्यती मात्र होइन उनी बिदेशिकाे इसरामा नाच्न थालेकाे भन्दै वामपन्थी बिश्लेषकहरुको तर्क रहेको छ ।
यसैबिच जनयुद्ध मा सुन्ने शक्ति देख्ने शक्ति र हातका औलोहरु गुमाएका नेता लामा जेल चलान भएपछि उनकी जिवनसाथी मनु तामाङले गृहमन्त्री थापालाई सम्बाेधन गर्दै भावउत्तेजक स्टाटस सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा राखेकीछन् ।
कुनै बेलाका सहयोद्धा रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री बनेको समयमा ज्यान मा…को अभियोगमा माइला लामा जेल चलान भएपछि उनकी पत्नी मनु लामाले मंगलबार राति भावुक स्टाटस लेखिन्।
‘बादल दाइ! यदि हजुरको भन्दा मेरो पछि ला… स परेँ भने पक्कै पुष्प गुच्छा लिएर आउनेछु’, उनले लेखेकी थिइन्, ‘हजुरको कार्यकाल सफल होस्!
यस्ताे छ उनकाेे स्टाटस
माइला लामालाई यसरि जेल चलान गरियो
नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका व्युरो इन्चार्ज माइला लामा ‘प्रज्वल’लाई कारागार चलान गरेको छ ।
ललितपुर जिल्ला अदालतमा मंगलवार भएको थुनछेकको बहसपछि अदालतले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
४ नम्बर ईजलासमा भएको बहस पैरवी खाजा समय भन्दा अगाडि नै सकिएको थियो तर आदेश भने राति करिब पौने ८ बजे मात्रै आएको थियो ।
बहसपैरवी पछि न्यायधिस मदनकुमार धामिको एकल इजलासले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको हो । अदालतको आदेश लगत्तै नेता लामालाई नख्खु कारागार पठाइएको छ ।
इन्चार्ज लामामाथि बम विस्फोट गराई ज्यानमार्ने उद्योग, कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको तथा हातहतियार खरखजना सम्बन्धि दुई वटा मुद्धा अभियोग लगाईएको छ ।
शनिवार राति साढे १२ बजे काठमाडौंको काडाँकारीबाट गिरफ्तार नेता लामालाई ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा भएको बम विस्फोटको घटनासँग जोडेर मुद्धा चलाईएको छ ।
आइतवार र सोमवार दुई दिन बयान लिएपछि आज थुनछेकको बहस भएको थियो । बहसका क्रममा नेता लामाले इन्कारी बयान दिएका थिए । नेता लामाले नख्खु विस्टोटको घटनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सो समयमा आफु उपत्यकामा नै नरहेको बताएका थिए ।
तत्कालिन दसवर्षे जनयुद्धको थालनी हुनुभन्दा केही वर्ष अघिदेखि नै त्यसको तयारी, प्रचारप्रसार, जनचेतना र संगठन निर्माण–सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका माइला लामा जनयुद्धको थालनीदेखि ‘अन्त्य’ सम्म विभिन्न भूमिकामा रहेर सक्रिय रहेका छन् । जनयुद्धकै क्रममा उहाँको आँखाको दृष्टि र कानको श्रवणशक्ति गुमेको थियो ।
जनवादी कलाकार समेत रहेका लामा पहिलो संविधासभा निर्वाचनमा काठमाडौं– ९ मा चुनाव भिडेर झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
कार्यकर्तामाझ अत्यन्तै कुशल, भरोसापूर्ण र अभिभावकत्वपूर्ण नेतृत्वका रुपमा स्थापित नेता लामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने निर्वाचन बहिस्कारमा सक्रिय बने ।
माइला लामा जनयुद्धकालदेखि हालसम्म नै आम सर्वसाधारण जनता, तमाम लेखक–साहित्यकार एवं सबै क्षेत्रका कलाकार–सर्जकहरुबीच निकै आत्मीय, सम्मानित र स्थापित छन् ।
मध्यराति यसरि प्रकाउ गरियो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज माइला लामालाई प्रहरीले मध्यरातमा पक्राउ गरेको छ ।
इन्चार्ज लामालाई काठमाडौंको काँडाघारीबाट प्रहरीले आइतबार मध्यराती पक्राउ गरेको हो ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले लामा पक्राउ परेको पुष्टि गर्दै उनलाई विशेष सूचनाको आधारमा काँडाधारीबाट राती साढे १२ बजे पक्राउ गरिएको बताए ।
उनका अनुसार माइला लामासँगै रेशम तामाङलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीले राजधानीका बिभिन्न स्थानमा भएको बम बिस्फोटका घटना लामाको निर्देशनमा भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
लामा नेकपाका प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । लामामाथि केही महिनायता उपत्यकाको नख्खु अनामनगर र घट्टेकुलोमा भएका बम विस्फोटनका घटना गराउन निर्देशन दिएको आरोप प्रहरीले लगाएको छ ।
बिभिन्न समयमा राजधानीको तीन स्थानमा बम बिस्फोट हुँदा ६ जनाको ज्यान गएको थियो । गत फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल टावरलाई लक्षित गरेर भएको बम बिस्फोटमा सिम बहादुर गुरुको मृत्यु भएको थियो भने अरु २ जना घाइते भए ।
यस्तै गत जेठ १२ गते राजधानीको अनामनगर घट्टेकुलो र सुकेधारामा भएको बम विस्फोटमा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो विस्फोटमा नेकपाका कार्यकर्ताको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो ।
पक्राउ परेका लामाको घर काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकास्थित डाँडागाउँ हो । लामा १० वर्षे जनयुदद्धका क्रममा गम्भीर घाइते भएका थिए। उनी राम्ररी सुन्न सक्दैनन् भने आँखा पनि कमजोर छन् ।
लामा तत्कालीन माओवादीको जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष पनि हुन् । २०६४ सालमा संबिधान सभाको निर्बाचनमा लामा काठमाडौंबाट उमेदवार भएका थिए । लामाले तत्कालिन माओवादीका लागि कयौं गीतहरू लेखेका छन् भने सांस्कृतिक कार्यक्रमको नेतृत्व पनि गरेका छन् ।
एकीकृत माओवादी बिभाजन भएपछि लामा मोहन वैद्य हुँदै नेकपामा आबद्ध भएका थिए । तर वैद्यबाट विप्लव अलग्गिएपछि उनी विप्लवतिर लागेका थिए ।
फागुन २८ गते सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेकपाका शीर्ष नेतासहित ५०० बढि नेता कार्यकर्ता प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।